I-Samsung Galaxy S10 ene-Exynos chipsets iya kuba nebhodi yesekethe ye-SLP ephambili | I-Androidsis
Ngokwengxelo yemithombo yeendaba yaseKorea yamva nje, i-smartphone elandelayo Isamsung ye-Samsung S10 iza kuza nebhodi yesekethe ye-SPL eqhubela phambili (i-Substrate Like PCB). Ingxelo ikwakhankanya ukuba oku kuyakuba kuphela kukwahluka kwefowuni ye-Exynos, hayi okwahlukileyo kweSpapdragon. Oku kuvela emva kokuba yaziwe ukuba Iibhetri ezintsha ze-Samsung ze-graphene ziya kuhlawulisa i-Galaxy Qaphela i-5 amaxesha ama-10 ngokukhawuleza.
Ngaphambili, bekuxelwe ukuba I-Samsung Galaxy S9 ingagcina indawo kwi-Exynos eyahlukileyo, kodwa hayi kwi-chipset esekwe kwi-Qualcomm ngenxa "yobunzima bobuchwephesha" kwi-chipset yaseMelika yokusayina ukusebenzisa iibhodi zenkqubo ezihambele phambili. Kubonakala ngathi ubunzima obufanayo busekhona ngeGPS S10 ezayo.
Ngeebhodi zeebhodi ze-SLP, iitshipsi ziyafakwa okanye zipakishwe kunye, ezinceda ukuba iinyawo zazo zincinci kakhulu. Ngelixa uninzi lweefowuni namhlanje lusebenzisa umaleko we-10 wobhedu kwi-PCB, i-SLP efumanekileyo isebenzisa i-20, ivumela uxinano oluphezulu lwezinto kwindawo ebekiweyo. Oku ivelisa indawo eyongezelelweyo ngaphakathi kwezinye izinto, njengebhetri enkulu, umzekelo. Nangona kunjalo, akuqinisekiswanga ukuba inkampani icwangcisa ukusebenzisa njani indawo eyongezelelweyo.
I-Apple isebenzise uyilo olufanayo kwi-iPhone X yayo kulo nyaka uphelileyo, elandela abalandeli bayo, ivumela inkampani ukuba yazise inqwaba enkulu emise okwe-L ngaphakathi.
Fumanisa: Ukuchazwa kweekhamera ezintathu zeGPS S10 kuhluziwe
I-Samsung Galaxy S10 kulindeleke ukuba ize kwiimodeli ezintathu: SM-G970F, SM-G975F kunye ne-SM-G973F. Zontathu ezi nguqulelo zeGPS S10 ngoku ziqinisekisiwe yi-Chinese Ministry of Industry and Information Technology, ekwabizwa ngokuba yi-TENAA.
Ngokweengxelo zangaphambili, iimodeli ze-SM-G970 kunye ne-SM-G973 kulindeleke ukuba zixhotyiswe ngescreen se-5.8-intshi ngekhamera enye ye-selfie kunye neekhamera zangasemva ezimbini. Okwesibini, I-SM-G975 kulindeleke ukuba ibe yiGPS S10 Plus, kunye neekhamera ezintlanu; ukuseta ikhamera ngasemva kathathu kunye neekhamera ezimbini zangaphambili. Iya kubandakanya nescreen esikhulu se-6.44-intshi. Akucaci ukuba kukho umahluko phakathi koyilo phakathi kweefowuni ezintathu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IiSamsung zeSamsung ze-Samsung kunye nee-chipset ze-Exynos ziya kuba nebhodi yesekethe ephezulu ye-SLP